२०७७ असोज ३ शनिबार ०३:३१:००
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दिल्ली जाँदा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र भारतबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेल चलाउने सम्झौता भएको थियो । भारतले दिने भनेको सात अर्ब अनुदानबाट पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर रेलमार्गमा चलाउन नेपाल सरकारले ८५ करोडमा दुईवटा रेल ल्याएको छ ।
जनकपुरमा हदिश खुद्दार, महोत्तरीमा रञ्जन भण्डारी
काठमाडौंमा पर्शुराम काफ्ले र जीवन बस्नेत
भारतको जयनगरबाट ओहोरदोहोर गर्ने गरी नयाँ रेल जनकपुर आइपुगेको छ । १० वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार भारत सरकारले अनुदानमा रेलगमार्ग बनाइदिएको छ भने रेलगाडी नेपाल सरकार आफैँले किनेको हो ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणको क्रममा सन् २०१० मा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकार र मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकारबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने समझदारी भएको थियो । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज, न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा रेल निर्माणका लागि त्यसवेला सम्झौता भएको थियो । रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सात अर्ब रुपैयाँ भारतले अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो ।
त्यसपछि २०१४ देखि भारतीय पक्षले रेलमार्ग निर्माण थालेको थियो । जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म दुई वर्षअघि अर्थात् २०१८ देखि रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, पहिले निर्माणमा ढिलाइ भयो, पछि रेल गाडी खरिदमा । त्यसैले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षपछि रेल आएको हो ।
अहिले जयनगरबाट जनकपुरसम्म–कुर्थासम्म ३४ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनका लागि तयार भएको छ भने यही रेलमार्गको जनकपुरबाट बर्दिबासखण्डको ३५ किलोमिटर निर्माण हुन बाँकी छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १८ किलोमिटरमा रेलमार्गको लिग बिछ्याउने काम भइरहेको छ । बिजुलपुराबाट बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन नै बाँकी छ । आगामी डिसेम्बर २०२० अर्थात् आगामी पुससम्म बर्दिबाससम्म रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म मुआब्जाको नै टुंगो लागेको छैन । भारतको इरकन इन्टरनेसनल कम्पनीले रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटरसम्म रेल्वे लिकका लागि सर्भे भई जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालिएको भए पनि लामो समयदेखि विवादको कारण कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । जनकपुरस्थित रेल्वे विभागका इन्जिनियर विनोद ओझाले कोरोना र मूल्यांकनमा विवाद भएकाले तत्काल मुआब्जा वितरण सुरु हुन नसकेको बताए । ‘बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म ५६६ कित्ताको जग्गालाई मुआब्जा तिर्नुपर्नेछ, यो विषय समाधान हुना साथ निर्माण सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।
सीमावर्ती भारतीय बजारसँग नेपाललाई जोड्ने गरी भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने भनिएका थप चार रेलमार्गको काम नै सुरु भएको छैन । पहिलो चरणमा विराटनगर–जोगबनी १८ किमि र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास ७९ किमि रेलमार्ग निर्माणको योजना बनेको थियो । दुवै रेलमार्ग सन् २०१५ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर, ढिलाइ हुँदा २०१४ बाट मात्र काम थालियो र २०१८ मा सम्पन्न गर्ने म्याद तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगरसम्म १८ किलोमिटर रेलमार्ग जोड्ने योजना छ । यसमध्ये अहिलेसम्म १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद र केही ठाउँमा संरचना विवादको कारण थप प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपाल–भारत जोड्ने अरू तीन रेलमार्गमा ७० किमिको न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, १५ दशमलव ३० किमिको नौतनवा–भैरहवा र १२ दशमलव १० किमिको रुपैडिया–नेपालगन्ज छन् । पहिलो चरणका दुई रेलमार्ग सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणको निर्माण थालनी गर्ने योजना छ । पहिलो चरणको निर्माण नै ढिलो हुँदा दोस्रो चरणका रेलमार्ग निर्माण थालिएको छैन ।
नेपालमा पहिलोपटक ९३ वर्षअघि रेल चलेको हो । ब्रिटिस र राणाकालमा रक्सौल–अमलेखगन्ज रेलमार्ग पनि बनेको थियो । चन्द्रशमशेरको पाला विक्रम सम्वत् १९८४ रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म रेल आएको थियो ।
त्यस्तै जयनगर जनकपुर महोत्तरी रुटमा पनि ८३ वर्षअघि रेल सञ्चालनमा आएको हो । भारतस्थित ब्रिटिस शासकले महोत्तरीको जंगलबाट काठ ढुवानीका लागि जनकपुरबाट महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म ५२ किलोमिटर रेल्वे सुरु गरेको थियो । पछि रेललाई नेपाल जिम्मा लगाएपछि यात्रु बोक्न थालिएको थियो । तर, बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि ०७१ देखि रेलमार्ग पूर्ण बन्द थियो । राणा र ब्रिटिसका पाला बनेको ‘न्यारोगेज’ विस्थापित गरेर अहिले ‘ब्रोडगेज’ रेलमार्ग बनेको छ ।
विगतमा ‘न्यारोगेज’ रेलले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म २९ किलोमिटर यात्रा गर्न दुईदेखि तीन घन्टा लगाउँथ्यो । अब ब्रोडगेज सेवा सुरु भएपछि एक घन्टामा पुग्न सकिनेछ । ब्रोडगेज रेलमा कम्तीमा १० देखि १५ डब्बा जोड्न सकिनेछ ।
महामारीका कारण सञ्चालन गर्ने मिति टुंगो लागेको छैन । रेल्वे कम्पनी र रेल विभागका अधिकारीहरूले विवाहपञ्चमी (४ पुस)अघि रेल नियमित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण भई स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित हुने निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । ‘सबैको चाहनाअनुसार हामी सकेसम्म चाँडै सञ्चालन गर्नेछौँ, तर अहिलेको महामारीको समय भएकाले ठ्याक्कै मिति तोक्न भने सकिएन,’ उनले भने ।
रेल सञ्चालन तथा नियमन गर्ने रेल्वे विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । त्यस्तै रेल सञ्चालनसम्बन्धी अझै नियुक्त गरिएको छैन । तर, मन्त्री नेम्वाङले तत्कालका लागि रेल सञ्चालन गर्न कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताए । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि स्थापना भएको नेपाल रेल्वे कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्रअनुसार रेल सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘तर, देशका अन्य ठाउँमा रेल सञ्चालन गर्नका लागि भने ऐन ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
रेल सञ्चालनका लागि जनकपुर आइपुगेको छ, तर रेल्वे कम्पनीसँग अहिलेसम्म जनशक्ति छैन । ‘यसअघि रेलचालकसहित २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भर्नाका लागि रेल विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, एकजनाले पनि जागिरका लागि निवेदन नदिएकाले भारतबाट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ रल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने । पहिलो चरणमा भारतबाटै प्राविधिक कर्मचारी ल्याउने र उनीहरूकै सहयोगमा नेपालीलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउने तयारी छ । यसका लागि न्यूनतम पनि दुई वर्ष लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २६ जना विदेशी र दुई सयजना नेपाली गरी दुई सय २६ कर्मचारी नियुक्त गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । चालक, इन्जिनियर, संकेत देखाउनेलगायतका कर्मचारी भारतबाट र बाँकी प्रशासनिक कर्मचारी नेपाली राखिने तयारी भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । भारतीय कर्मचारी राख्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता हुँदै छ । सम्झौतापत्र भारतीय पक्षले तयार गरिरहेका छन्, त्यसमा दुवै पक्षबीच छलफलपछि सहमति हुनेछ ।
भारतीय रेलमन्त्री पीयूष गोयलले भने, ‘नेपाललाई दुईवटा रेल दिएका छौँ’
तर, भारतले रेलगाडी दिएको होइन, रेलमार्ग बनाइदिएको हो
भारतका रेल्वेमन्त्री पीयूष गोयलले नेपालसँग प्राचीन सांस्कृतिक तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने गरी नेपाललाई दुईवटा डेमु (डिजेल, इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) सेट हस्तान्तरण गरेको बताएका छन् । उनले भनेजस्तै रेलगाडी होइन । रेलमार्ग भारतले बनाइदिएको हो । जयनगर–जनकपुर– बर्दिबासहित पाँच नाकामा रेल सञ्चालनका लागि मार्ग बनाउन भारत सरकारले सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार जयनगरबाट जनकपुरसम्म रेलमार्ग बनेको हो । रेलगाडी भने नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीसँग किनेको हो, जसको लागत ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) खरिद प्रक्रियाअनुसार दुईवटा रेल ल्याएको हो । सरकारले ०७६÷७७ को बजेटमा रेलगाडी खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसको भुक्तानीसमेत गरिसकेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।
जनकपुर–जयनगर चल्ने रेलगाडीमा चार कोच (डिब्बा) छन् । यसले एक हजार तीन सयसम्म यात्रु बोक्नेछ । लिकको डिजाइनअनुसार एक सय किलोमिटर प्रतिघन्टाको गति हुन सक्छ । तर, स्टेसन छोटो दूरीमा भएको हुनाले ७० देखि ८० किलोमिटर प्रतिघन्टासम्मको गति हुनेछ । यो डेमु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेल हो । डेमु रेल दुवैतर्फबाट अर्थात् अगाडि, पछाडि दुवै दिशातर्फ गुड्छ । अन्तिम गन्तव्यमा पुगेपछि टर्निङ नगरी पछाडिको भागबाटै अघि बढ्छ । यसको इन्जिन डिजेल र विद्युत् दुवैमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । डिजेलले सञ्चालन हुने मेसिनले उत्पादन गरेको विद्युत्मार्फत चल्ने रेललाई डेमु रेल भनेर चिनिन्छ ।
रेलको स्वागत, सेवाको पर्खाइ
शुक्रबार १२ बजेसम्म रेल आउने हल्लाले बिहान ९ बजेदेखि नै जनकपुरस्थित रेल्वे स्टेसनमा सर्वसाधारणको घुइँचो थियो । सबै उमेर समूहका सर्वसाधारण लिकनजिकै बसेर रेल आउने बाटो हेरिरहेका थिए । भिड देखेर स्थानीय प्रशासन पूरै सतर्क थियो, तीन सय सुरक्षाकर्मी परिचालन थिए । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेत र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नागेन्द्र सेन आफँै सुरक्षा व्यवस्थापनमा जुटेका थिए ।
भिडमा भेटिएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– ३ का ३० वर्षीय राजीव थापा उत्साही देखिन्थे । ‘बिहानै ९ बजेदेखि नै साथीहरू मिलेर आएका हौँ । सानो हुँदा रेल चढेर पटक–पटक जयनगरसम्म जान्थँे । नयाँ रेल कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको छु,’ उनले भने, ‘अब आफ्नै मुलुकमा ब्रोडगेज रेल चढ्न पाइने भयो ।’ तर, रेल चल्ने मितिको टुंगो लागेको छैन ।
रेल्वे स्टेसन पुगेका सर्वसाधारणले चार–पाँच घन्टा कुरेपछि दुईवटा रेल शुक्रबार दिउँसो जनकपुर आइपुगे । बिहान करिब साढे ११ बजे जयनगरबाट जनकपुरका लागि प्रस्थान गरेका दुवै रेल दिउँसो पौने २ बजे जनकपुर रेल्वे स्टेसन आइपुगेका थिए । हर्न बजाउँदै रेल आएपछि सर्वसाधारणले हात हल्लाए अनि स्वागत गरे । खुसी भएर ताली पिटे र सेल्फी लिन व्यस्त रहे ।
चालक दलसहितका कर्मचारी नेपालमा रेलको भव्य स्वागत देखेर चकित भए । भारतीय रेलचालक विभाव र एसके यादवले रेल चलाएर ल्याएका थिए । नेपाल सरकारले भारतबाट जिटुजी प्रक्रियाबाट भारत सरकारकै स्वामित्वको कोंकेन रेल्वे कर्पोरेससँग रेल किनेको थियो । तिनै दुई रेल जनकपुर आएका हुन् । रेललाई नेपालकै झण्डाको रङमा पेन्ट गरिएको छ । यसले रेल आकर्षक देखिएका छन् ।
जनकपुर पुगेपछि कम्पनीका वरिष्ठ मेकानिकल इन्जिनियर दीपक त्रिपाठी र परियोजना प्रबन्धक जिभी नागेन्द्रले दुई रेलका कागजात नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई र नेपाल रेल विभागका सिनियर इन्जिनियर देवेन्द्र साहलाई हस्तान्तरण गरे । हस्तान्तरणपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई, महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालसहित जिल्ला सुरक्षा निकायका अधिकारीले जनकपुर स्टेसनबाट कुर्थासम्म रेल चढेर अनुगमन तथा निरीक्षण गरे ।
रेल आए पनि ती तत्काल जनकपुरमा बस्ने छैनन् र सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्नेछ । तत्काल सञ्चालनको अवस्था नरहेकाले दुवै रेललाई जयनगरस्थित नेपाली स्टेसनमा पु¥र्याइने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले जानकारी दिए । जयनगरमा तत्काल भारतीय पक्षकै रेखदेखमा रेल रहने उनले बताए ।
रेलमार्ग र रेल तयार भए पनि तत्काल सञ्चालन हुने छैनन् । विवाहपञ्चमी (पुस ४) सम्म रेल नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर रेल सञ्चालन हुने भएकाले कोरोना महामारीका वेलामा तत्काल रेल सञ्चालनको अवस्था नरहेको रेल्वे कम्पनीको भनाइ छ । ‘एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल–भारत क्रसबोर्डर चल्ने भएकाले सञ्चालनमा केही ढिलाइ हुन्छ,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने ।
भारतको सहयोगमा निर्माण भइरहेको जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालनको तयारी छ । दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १८ किलोमिटरमा सञ्चालन गरिनेछ, जहाँ अहिले रेलमार्ग निर्माण जारी छ । त्यस्तै, बिजलपुरा–बर्दिबास १७ किलोमिटरसम्म रेल्वे लिकका लागि सर्भे भई जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालिएको रेल्वे विभागका जनकपुर–बर्दिबास साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए ।
रेल परीक्षणका लागि चालक दलका चार सदस्यसहित २० भारतीय प्राविधिक जनकपुर आइपुगेका छन् । उनीहरूमध्ये केही फर्किनेछन् भने केही रेलसँगै जयनगरमै बस्नेछन् । प्रशासनिक कर्मचारी नेपाल र प्राविधिक कर्मचारी भारतीय नै राखेर तत्काल रेल चलाउने तयारी छ । भारतीय कर्मचारी राख्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सम्झौताको गृहकार्य जारी छ । ‘सम्झौतापत्र भारतीय पक्षले तयार गरिरहेका छन्, त्यसमा दुवै पक्षबीच छलफलपछि सहमति हुनेछ,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने ।
यता रेल विभागले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विभिन्न २९ पदमा एक सय २९ जनाको विज्ञापन गरिएको छ । यसअघि रेलचालकसहित २६ जना प्राविधिक कर्मचारीका लागि विभागले सूचना प्रकाशित गरे पनि कसैको दरखास्त परेको थिएन । त्यसपछि भारतबाटै प्राविधिक कर्मचारी ल्याउने र उनीहरूकै सहयोगमा नेपालीलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउने तयारी थालिएको हो । ऐन संसद्मा रहेकाले तत्काल रेल सञ्चालन ऐन अध्यादेशबाट ल्याएर चलाउने तयारी छ ।
रेल्वे सञ्चालक समितिले रेलको टिकटको मूल्य निर्धारण गरी स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । भाडादर मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । महाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरको भाडा जनरल बोगीमा ७० रुपैयाँ र एसी बोगीमा ३ सयसम्म छ । त्यसैगरी, प्रतिकिलोमिटर बढीमा १५ रुपैयाँ जनरल बोगीमा र एसीमा जनरलभन्दा ५ गुणा बढी भाडा तोकिएको उनले बताए । एक स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा झरेको खण्डमा प्रतिकिलोमिटर १५ रुपैयाँको दरले भाडा लाग्नेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्टेसनसम्म यात्रा गरे त्योभन्दा कम भाडा लाग्ने उनले बताए ।
कुर्थादेखि जयनगरसम्म ५ वटा स्टेसन जयनगर, इनर्वा, खजुरी, वैदही र कुर्था छन् । तीनवटा हल्टहरू जनकपुर, मैनाथपुर र परवहा रहेका छन् । स्टेसनमा एकभन्दा बढी रेल्वे लिक बनाएकाले त्यहाँ रेलको क्रसिङ गरिनेछ । हल्ट भएको स्थानमा रेल केही समयका लागि विश्राम अर्थात् त्यहाँ यात्रु ओसारपसार मात्रै हुनेछ ।
स्टेसन र हल्ट भएका स्थानमा रेलको टिकट काटिनेछ । अनलाइनमार्फत पनि टिकट बुक गर्न सकिने महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । टिकटसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माणको कार्य भइरहेको उनले बताए । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर यात्रा गर्न दुईदेखि तीन घन्टा लाग्ने रेललाई ब्रोडगेज सेवा सुरु भएपछि एक घन्टामा उक्त दूरी तय गरिने इन्जिनियर ओझाले बताए ।
भारतलाई उपनिवेश बनाएका वेला ब्रिटिस शासकले विक्रम संवत् १९९४ मा महोत्तरीको जंगलबाट काठ ढुवानीका लागि ५२ किलोमिटर रेल्वे सञ्चालन गरेका थिए । पछि ती रेल नेपाललाई जिम्मा दिइएको थियो । नेपालले ती रेलमा यात्रु ओसारपसार गरेको थियो । तर, ०५९ मा आएको बाढीले जीर्ण अवस्थामा रहेको महोत्तरीको विग्ही नदीको पुल भत्काइदियो । त्यसपछि रेल जनकपुर–जयनगर २९ किलोमिटरमा सीमित भयो ।
मर्मतसम्भारको अभाव र राजनीति दलले कार्यकर्ता भरणपोषणको केन्द्र बनाएपछि सेवा विस्तार बिस्तारै बन्द हुँदै गयो । पटक–पटक लिक छाड्ने तथा दुर्घटनामा पर्ने न्यारोगेज सेवालाई ब्रोडग्रेज सेवामा स्तरोन्नति गर्ने प्रयास सुरु भयो । यसका लागि भारत सरकारसँग आग्रह गरियो । अनि ०७१ माघदेखि उक्त सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरी स्तरोन्नतिको काम हुँदै आएको थियो । त्यही स्तरोन्नति गरिएको लिकमा नयाँ रेल चलाउने तयारी भएको हो ।
रेलमा कस्ता छन् सुविधा ?
कम्पनीले डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट भएका रेल डिजेल र विद्युत् दुवैबाट चल्ने विश्वमै नयाँ मोडेलका रूपमा तयार गरिएको दाबी गरेको छ । डिपिसी १९०१ र डिपिसी १९०२ नम्बरको दुवै रेल १६ सय हर्स पावरका छन् ।
प्रतिघन्टा ११० किलोमिटरको गतिमा चल्न सक्ने रेलमा एक हजार तीन सय सिट क्षमता छ । एउटै इन्जिन भए पनि दुवैतर्फबाट चलाउन सकिने रेलको एउट बोगी (डब्बा)मा ७० सिट छन् । २० मिटर लामो रेलको इन्जिनबाहेक एक एसी र दुई जनरल बोगी छन् ।
प्रतिकिलोमिटर दुई लिटर डिजेल खपत हुने रेलमा आवश्यकताअनुसार थप चारवटा बोगीसम्म जोड्न सकिने निर्माण कम्पनीको दाबी छ । नेपाललाई लक्षित गरी बनाएको रेल भारतमा सञ्चालनमा रहेको अन्य रेलभन्दा फरक रहेको निर्माण कम्पनीका मेकानिकल इन्जिनियर दीपक त्रिपाठीले बताए ।
दुवै फरक र आकर्षक मोडेलका रेल रहेको तथा गति र क्षमता राम्रो रहेको मेकानिकल इन्जिनियर त्रिपाठीले बताए । ‘यसको स्पिड र लोड बोक्ने क्षमता धेरै राम्रो छ । नेपालका लागि हामीले स्पेसल रेल डिजाइन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यात्रीलाई झोला राख्न सजिलो हुने डिजाइन बनाइएको छ ।’
प्रत्येक बोगीमा शौचालय छ । एसीबाहेक अन्य जनरल बोगीमा ठाउँठाउँमा पंखा लगाइएको छ । यात्रुबाहक रेल भएकाले सामान ओसारपसार गर्न भने मिल्नेछैन । ‘मालसामान ओसारपसार गर्न मिल्दैन । पूर्णतः यात्रुबाहक रेल हुन्,’ इन्जिनियर त्रिपाठीले भने ।